September 22, 2019 - Myitter
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့် လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါက မဲဇလီ ရွက်ပြုတ်ရေဖြင့် ကုပါ….
September 22, 2019 Myitter 0
ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့် ပေါင်၊ခြေသလုံး အကြောတောင့်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ပါက မဲဇလီ ရွက်ပြုတ်ရေဖြင့် ကုပါ.. လူတိုင်းသိကြသည်။တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ည (၁၂)နာရီ အဖူး ခူး။ ဆေးပေါင်းခလို့ သုပ်စားတဲ့အပင်။ထင်ရှားသည်။အလွန်ပေါပါးသည်။တောင်းလို့ လွယ်သည် ။ ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ရောဂါများမှာ တဦးနှင့်တဦး မတူကြပါ။ရောဂါဖြစ်ပြီး ပေါင်။ခြေသလုံး မှ အကြော တောင့်တင်းကာ အိပ်ရာမှထခက်။လမ်းမလျှောက် နိုင် […]
မဲဆောက်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာနွယ်ဖွားမိန်းကလေး၅၀ထက်မနည်းကို မူးယစ်ဆေးတိုက်မုဒိမ်းကျင့်တဲ့သူ ဖမ်းမိ
မဲဆောက်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာနွယ်ဖွားမိန်းကလေး၅၀ထက်မနည်းကို မူးယစ်ဆေးတိုက်မုဒိမ်းကျင့်တဲ့သူ ဖမ်းမိ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာထိုင်းနဲမြန်မာနွယ်ဖွားတိုင်းရင်းသားမိန်းကလေးတွေကိုတနာရီဘတ်၅၀၀နဲ့ဧည်ကြိုအလုပ်ဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့အွန်လိုင်းကနေကြော်ငြာပြီးအလုပ်လက်ခံတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမြို့ပြင်ကတည်းခိုးခန်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးမူးယစ်ဆေးတိုက်မုဒိမ်းကျင့်နေတဲ့အသက်၂၈နှစ်အရွယ်အခရဖုန်းကိုရဲတွေကမယ်ပရပ်ကွက်မှာပဲဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမိန်းကလေးတွေတိုင်ကြားချက်တွေကိုမှတ်တမ်းသာဖွင့်ပြီးတရားခံတွေဖမ်းမမိတာကြောင့်ကျုးလွန်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေကမဲဆောက်အခြေစိုက်သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကာမစော်ကားခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာမဲဆောက်မြို့ ပိုင်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်မှာတော့ကျူးလွန်သူကိုစက်တင်ဘာလ၂၁ရက်နေ့က ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ် ။ ရဲက တော့ တရားခံကို အ ရေးယူဖို့အတွက် DNA စစ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းကျူးလွန်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေက သက်သေအဖြစ်ထွက်ဆိုကြပြီလို့ဆိုပါတယ် ။ မိန်ကလေးတွေအ နေနဲ့ အွန်လိုင်းကအလုပ်တွေကို အယုံမလွယ်ကြဖို့လည်းသတိပေးသွားပါတယ်။….. Credit>>#SAW
ပခုက္ကူ ဧရာဝတီတံတားပေါ်တွင် 21.9.2019 ည ၁၀နာရီခွဲခန့်က မိုဘိုင်းလီဂျက်ဂိမ်း ကစားနေသောသေ သူငယ်ချင်း၆ယောက်အုပ်စုမှ ၃ယောက်သည် တံတားမိုင်တိုင် ၃၁ တွင်ရထားလမ်ဘက်အခြမ်း၌ ဂိမ်းကစားနေကြစဉ်၂ယောက်မှ ပြန်ကြအောင်ဟု ပြောပြီး ရထားလမ်းဘက်မှကားလမ်းဘက်သို့ ကူးကြစဉ် မောင်ကောင်းဆက်ဟိန်းမှာ ဂိမ်းဆော့ရင်း တန်းလန်းဖြင့် ရထားလမ်းကို ကူးလာရာ ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းအကြား တစ်ပေခန့် ဟနေသောနေရာမှ […]
ဆရာလုပ်နေတဲ့ ရာပြည့် ဦးညီညီထွေးဟာ ကျောင်းသူတစ်ဦးကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိဘများက မကျေနပ်လို့ ကျောင်းရုံးခန်းမှာ
မန္တလေးမြို့က ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ဆရာလုပ်နေတဲ့ ရာပြည့် ဦးညီညီထွေးဟာ ကျောင်းသူတစ်ဦးကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိဘများက မကျေနပ်လို့ ကျောင်းရုံးခန်းမှာ လာရောက်ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မိဘနှစ်ပါးမှ ဆရာ ဦးညီညီထွေးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်ပစ်ပေါက်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ ယောက်ကျားဖြစ်သူက ဆရာ ဦးညီညီထွေးမျက်နှာကို လက်သီးနဲ့ ထပ်ထိုးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ […]
(၇) နှစ် အရွယ် ပထမတန်း တန်းကျောင်းသူလေးကို သွေးထွက်သည်အထိ မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်မှု……
မ​ကွေးမြို့တွင်​ ပထမတန်း​ကျောင်းသူတစ်​ဦးကို​ ကာမစပ်ယှက်​ရန်​ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြင့်​မဖွယ်​မရာပြုလုပ်​ မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး မ​ကွေးမြို့တွင်​ ပထမတန်း​ကျောင်းသူ(၇)နှစ်​ကိုအတင်းအဓမ္မကာမဆက်​ဆံရန်​ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြင့်​အမျိုးသားတစ်​ဦးကမဖွယ်​မရာပြုလုပ်​ခဲ့မှူ ယ​နေ့ စက်​တင်​ဘာလ ၂၁ရက်​ နံနက်​ ၁၀နာရီအချိန်​ခန့်​ ကဖြစ်​ပွားခဲ့သည်​။ မ​ကွေးမြို့ ​အောင်​​မေတ္တာ(ခ)ရပ်​ကွက်​​နေထိုင်​သူ ​ဒေါ်————(၂၉)နှစ်​သည်​​မိသားစုစားသုံးရန်​အတွက်​ ဆန်​ဝယ်​ပြီး​နေအိမ်​သို့ပြန်​လာရာတွင်​ ​နေအိမ်​၌ သမီးဖြစ်​သူ မ————(၇)နှစ်​ ပထမတန်း​ကျောင်းသူသည်​ ငို​နေသည်​ကို ​တွေ့ရသဖြင့်​ ဖြစ်​စဉ်​အား​မေးမြန်​ခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​။ “အမျိုးသားတစ်​ဦးကအိမ်​​ပေါ်တက်​လာပြီး […]
ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Online ပေါ်တင်လိုက်တယ်..ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က ပြောင်လှောင်ကြတယ်
မလှောင်ပါနဲ့ သားရယ် ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကိုလူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲOnlineပေါ် တင်လိုက်တယ်….. သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်က မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကိုသွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ်……. လူငယ် > […]
အဖွားကပြောတယ်။ “အမျိုးသားသေရင်တော့ ဒီဝဋ်တွေက ကျွတ်ပါပြီ” တဲ့..
အိမ်နားမှာ အဖွားတယောက် မနက် ၇:၀၀ ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင် အော်အော်ရောင်းနေတာ အသံတော့ တခါတရံ ကြားတတ်တယ် ကိုယ်လည်းမတွေ့ဖူးတော့ ဘာရောင်းမှန်းမသိဘူး။ ဟိုးတလောက အလုပ်သွားတဲ့ လမ်းမှာဆုံတော့မှ အဖွားက တောင်နံကြီး၊ဆေးမြစ်စုံနဲ့ အုန်းဆီရောင်းတာမှန်း သိရတယ်။နောက်ရက် အဖွားလာရင် ဝယ်မယ် အားခဲပြီး စောင့်နေတာ။ ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုအရာလေးတွေ ရောင်းနေတာ […]
ချန်ပီယံဆု နဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
ချန်ပီယံဆု နဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပနေသည့် International Future Series ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကို ယနေ့ညနေပိုင်းက ဆက်လက်ကျင်းပရာ မြန်မာကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်သွားသည်။ သက်ထားသူဇာသည် ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် အိန္ဒိယကစားသမား ရှာရူတီနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်ပွဲပြတ် […]